२४ घण्टामै देखिए कोरोनाका ८३ नयाँ संक्रमित, उपत्यकामा पाँच दिनमै भित्रिए २५ हजार मानिस « Pahilo News
२४ घण्टामै देखिए कोरोनाका ८३ नयाँ संक्रमित, उपत्यकामा पाँच दिनमै भित्रिए २५ हजार मानिस
प्रकाशित मिति : 13 May, 2020 7:32 am
काठमाडौं, ३१ बैशाख । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई सय १७ पुगेको छ । मंगलबार मात्रै ८३ नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । २४ घण्टामै यति ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएको पहिलो पटक हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार पर्सामा ५७, रूपन्देहीमा नौ, कपिलवस्तु आठ, महोत्तरी, धनुषा र भक्तपुरमा दुई–दुई तथा बारा, काठमाडौं र सर्लाहीमा एक–एक नयाँ संक्रमित देखिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो २४ घन्टामा दुई हजार दुई सय ३६ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ । अहिलेसम्म पिसिआर प्रविधिबाट १८ हजार नौ सय ६४ र आरडिटी विधिमार्फत ५९ हजार ६ सय २७ गरी ७८ हजार पाँच सय ९१ जनाको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए ।
सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका चिकित्सक डा. अनुप बाँस्तोलाले संक्रमितमा देखिएको लक्षणका आधारमा कोरोनाको उपचार हुने बताए । आइसोलेसनमा रहँदा बढी तनाव लिएर मानसिक समस्या समेत हुन सक्ने भन्दै संक्रमित भर्ना गरेका अस्पतालले मनोपरामर्श सेवा पनि दिँदै आएका छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार एक हप्तापछि गम्भीर बिरामी देखिने छन् ।
पर्सामा अहिलेसम्म हजारभन्दा बढीको स्वाब संकलन गरिएको छ । नारायणी अस्पतालका अनुसार संक्रमण देखिएका नयाँ व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेकाको पनि अब स्वाब संकलन गरिने नारायणी अस्पतालकी प्याथोलोजिस्ट डा. नीरा पाठकले बताइन् ।
कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउनमा थप कडाइ गरेको छ । वितरण गरिएका पास रद्द गर्दै गृह मन्त्रालयले बुधबारदेखि एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला जानमा पनि रोक लगाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले लकडाउनमा कहिले कडाइ तथा कहिले खुकुलो गर्दै आएको छ । उपत्यकाका मुख्य सडकमा धेरै भीड नभए पनि भित्री सडक र पसलमा भीडभाड हुने गरेको छ । खाद्यान्न तथा तरकारी खरिदमा सामाजिक दूरी अपनाइएको छैन । पसल सञ्चालकले पनि सुरक्षा नअपनाउँदा जोखिम बढेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट